Imibono yokuhlobisa ngephepha lodonga ekamelweni lokulala eliphezulu | Hlobisa
Imibono yokuhlobisa ngephephadonga ekamelweni lokulala
UMaria Jose Roldan | | Izithako, Umhlobiso
Iphephadonga laziwa nangokuthi lodonga futhi liyindlela esheshayo futhi engabizi kakhulu yokushintsha ukubukeka kwegumbi, noma ngabe lithini. Kunemiklamo eminingi ngakho ukukhetha eyodwa evumelana kahle nomhlobiso wakho (noma ngabe yini) kungaba lula impela. Yize ukusebenzisa iphepha lodonga kufanele wazi ukuthi ungakwenza kanjani, ngoba uma kungenjalo ungaba nemiphumela engadingeki egumbini.
Namuhla sizokhuluma nawe mayelana nokuthi ungayihlobisa kanjani ngephepha lodonga ekamelweni lokulala nokuthi ngale ndlela, ungaba nokubukeka okusha futhi okuhle kuleli gumbi elibalulekile. Ukuhlala kwakho yindawo lapho uphumula futhi uvuselele amandla akho, ngakho-ke umhlobiso wayo ubaluleke kakhulu.
Abantu abaningi bazamile ukusebenzisa iphepha lokunamathisela odongeni ekamelweni lokulala, kodwa bambalwa kuphela abakwaziyo ukuthi bangazisebenzisa kanjani lezi zinto ngokugcwele. Iphephadonga akufanele lisetshenziswe kuphela njengendlela yokususa izindonga ezingenalutho ... Kunalokho, kufanele libe ngumdlali omkhulu ekwakhiweni kwegumbi kulo lonke. Qhubeka ufunde ukuthola ukuthi iziphi iziphakamiso ezingaba ngumqondo ongcono wokuhlobisa okusha kwekamelo lakho lokulala.
1 Setha iphalethi yombala
2 Dala udonga lokugqamisa
3 Yenza i-headboard yesikhashana
4 Faka okunye ukuthungwa
Setha iphalethi yombala
Enye indlela yokusebenzisa iphepha lodonga ekamelweni lakho lokulala ukusetha iphalethi yombala kuyo yonke iphrojekthi yokuhlobisa yegumbi. Isibonelo, ungasebenzisa iphalethi le-monochrome olithandayo futhi elizwakala lihle kakhulu. Kusuka kumaphephadonga kuya kumashidi noma amakhushini kufanele ahambisane ukuze abe nokubukeka okungaguquguquki ngaphakathi kokuhlobisa kwekamelo lokulala.
Uma uthatha isinqumo sokuhamba ngalo mzila, ukhiye ukukhetha isithombe sangemuva osithandayo kuqala. Bese wakhe elinye igumbi elizungezile. Ngenkathi ungenza noma yini ngobuhle obufunayo, khumbula ukuthi usayizi wephethini ubalulekile. Kufanele kube ngokulingana nosayizi wekamelo. Amakamelo amakhulu angaphatha amaphethini amakhulu futhi ngokufanayo.
Dala udonga lokugqamisa
Njengoba iphepha lodonga livame ukuba isitatimende sesitayela, kuyisimo semvelo ukuhlobisa udonga lwe-accent. Izindonga zama-accent zenzelwe ukuguqula amakhanda, ngakho-ke kufanele kube lapho usebenzisa khona amaphethini akho amakhulu nemithunzi egqamile… ihlanganisa ubuntu bakho bonke ngaphandle kokwesaba.
Kulokhu, ukubekwa kwesithombe sakho sangemuva kungukucatshangelwa kwakho okubaluleke kakhulu. Ngokufanelekile, ufuna udonga lwakho lokugqamisa ukugqamisa indawo ebalulekile yegumbi, njengoba kuhloselwe ukudonsa ukunaka kwabo bonke abanenhlanhla yokubukeka. Isikhathi esiningi sisegumbini lokulala, udonga lwama-accent yilona olusemuva kwe-headboard yombhede. Kodwa-ke, kwesinye isikhathi kungenziwa okuhlukile, ikakhulukazi uma uhamba ngephethini efana nomdwebo.
Yenza i-headboard yesikhashana
Asivume, ifenisha iyabiza. Uma ungakulungele ukuphuma uyotshala kubhodi ephezulu yekhwalithi, iphephadonga lingaba yisixazululo sakho esinenzuzo kuwe. Imiqulu yamaphephadonga ibiza imali encane futhi le nto ingasetshenziswa ukufanela ukunambitheka kobuhle obuhlukahlukene.
Kulokhu, uhlelo lokusebenza uqobo luyinkinga yakho enkulu. Okokuqala, kufanele uyilinganise kahle. Kufanele ulinganise iphephadonga ukuthi likhulu kancane kunobubanzi bombhede wakho. Umthetho omuhle wesithupha ukushiya umngcele ongaba ngamasentimitha amabili ohlangothini ngalunye. Bese kuba khona ukubekwa. Yenza okusemandleni akho ukusebenzisa iphephadonga odongeni olushelelezi nolungelona igout. Ukwenza kanjalo kuzonciphisa amathuba akho okuthola amabhamuza omoya acasulayo emphumela wokugcina.
Uma uhlala ngokuqasha futhi ungafuni ukususa ngemuva kwesithombe sangemuva lapho kufanele uhambise, ungakhathazeki ... Ngoba kukhona iphepha lodonga okulula kakhulu ukulisusa odongeni ngaphandle kokushiya izinsalela. Buza isitolo sakho sokuhlobisa ukuze bazokutshela ukuthi hlobo luni lodonga oluthandayo ongaluthanda kakhulu.
Faka okunye ukuthungwa
Ekugcineni, iphepha lodonga lingasetshenziswa ukwengeza umthamo odingeka kakhulu wokuthungwa kunoma iliphi igumbi. Khumbula, ekwakhiweni kwangaphakathi, ukuthungwa kubhekisela endleleni into ebonakala ngathi izwakala ngayo. Ukufaka izinhlobo ezahlukahlukene zokwakheka egumbini kungenye yezimiso eziyinhloko wedizayini yangaphakathi ngoba yenza igumbi libukeke lihehe ngokwengeziwe.
Akunandaba ukuthi hlobo luni lokuphrinta olisebenzisayo ekamelweni lakho lokulala, isithombe sakho sangemuva sizoba nokuthungwa. Lokhu kungenxa yengxenye yezinto ezisetshenzisiwe ekwakhiweni kwayo. Kodwa-ke, ngokuqinisekile ungawukhulisa umuzwa wokuthungwa ngokukhetha iphethini ebukeka kabi. Ngalokhu, kukhokhela ukuhamba nokuphrinta okuphefumulelwe ngezinto zemvelo. Ukuphrinta okubukeka kwemvelo okufana nokhuni namatshe yikho konke ukufutheka okwamanje futhi kuzokusiza ukuthi udale ukubukeka kwesimanje, okungahambi kahle ... Ukubukeka ngokwemvelo nangokoqobo, kuzoba ngcono.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Umhlobiso » Imibono yokuhlobisa ngephephadonga ekamelweni lokulala
Ungapenda kanjani futhi kanjani ifenisha yasekhishini
Uyakha kanjani ingadi ye-zen